Vaovao momba ny OnePlus: fandefasana, finday, root ary maro hafa - Androidsis | Androidsis (Pejy 2)
OnePlus 9 Lite: inona no azontsika antenaina amin'ity telefaona manaraka ity?
Ny OnePlus 9 Lite dia iray amin'ny avo lenta manaraka miaraka amin'ny Snapdragon 870. Fantaro ny zava-misy rehetra voamarina sy tafaporitsaka momba ity finday ity.
OnePlus 9 sy 9 Pro: ny sasany amin'ireo mampiavaka azy dia tafaporitsaka [+ Renders]
Ny OnePlus 9 sy 9 Pro no marika voalohany amin'ny marika. Maro ny fiasa sy ny tsipiriany efa navoaka.
OnePlus dia tsy hanana iray fotsiny fa smartwatches roa havoaka
Miandry fampahalalana bebe kokoa momba ny mety ho smartwatch OnePlus faharoa, ny Watch RX.
Ny OnePlus 8T dia mahazo vaovao farany OxygenOS 11 miaraka amin'ny fanatsarana lehibe
Ny OnePlus 8T dia mandray ny fanavaozana lozisialy vaovao tonga amin'ny OxygenOS 11.
OnePlus Nord N10 5G dia mahazo patch patch Desambra miaraka amin'ny fanavaozana farany
Ny OnePlus Nord N10 5G izao dia mandray fanavaozana vaovao izay manampy ny patch fiarovana Desambra.
The OnePlus 8T Cyberpunk 2077 no finday manokana natomboka tany Sina izay ahafahantsika misintona ireo sary mihetsika sy maro hafa.
Ny OnePlus 9 Pro dia hitazona ny famolavolana ny 8T fa mitahiry ny fiolahana ny efijery
Ny fandefasana tafaporitsaka voalohany an'ny OnePlus 9 Pro dia mampiseho amintsika endrika izay azo zahana avy amin'ny kinova teo aloha.
Ny OnePlus Nord N10 5G sy N100 dia tsy hanavao ny Android12
Ny OnePlus Nord N10 5G vaovao sy N100 vaovao dia tsy havaozina amin'ny Android manaraka, fa amin'ny Android 11 ihany.
OnePlus 5 dia mahazo EIS miaraka amin'ny fanavaozana OxygenOS 10.0.1
OnePlus 5 sy OnePlus 5T dia mandray ny fanavaozana OxygenOS 10.0.1, tadiavo ny vaovao rehetra tafiditra ao.
Ny fakantsary OnePlus 8T dia nihatsara kokoa tamin'ny fanavaozana OxygenOS 11.0.4.5
OxygenOS 11.0.4.5 no fanavaozana rindrambaiko vaovao izay navoaka ho an'ny OnePlus 8T miaraka amin'ny fanatsarana isan-karazany.
Ny fakantsarin'i OnePlus 8T dia tsara kokoa noho ny fanavaozana vaovao
Ny OnePlus 8T dia mandray ny fanavaozana rindrambaiko vaovao miaraka amin'ny fanatsarana fakan-tsary.
OnePlus 8T dia mandray ny fanavaozana OxygenOS 11.0.2.3
OnePlus 8T dia mahazo ny fanavaozana faharoa, amin'ity tranga ity OxygenOS 11.0.2.3 izay manamboatra olana maro. Fantaro amin'ny an-tsipiriany ny momba azy.
OnePlus Nord N10 5G sy Nord N100: ofisialy izao ny finday roa mora vidy
Ny OnePlus Nord N10 5G sy Nord N100 dia natomboka teny an-tsena ho toy ny finday midadasika sy ambany.
Ny OnePlus 9 dia hampandroso ny daty fandefasana azy hatramin'ny martsa 2021
OnePlus dia hampandroso ny fampisehoana ny OnePlus 9 isam-bolana mba hahatratra ny tsena amin'ny volana martsa fa tsy amin'ny volana aprily araka ny nomanina voalohany.
Ny OnePlus 7 sy OnePlus 7T dia mahazo fanavaozana vaovao miaraka amina fanamboarana maro
Ny OnePlus 7 sy 7 Pro, ary ny OnePlus 7T sy 7T Pro dia mendrika fanavaozana lozisialy vaovao.
Ny OnePlus 8T dia mahazo ny fanavaozana ny lozisialy voalohany miaraka amin'ny fanatsarana fakan-tsary maro sy fampiasa iray antsoina hoe Canvas.
Ny OnePlus 8T dia mandalo fitsapana mafy ho an'ny tanjaka sy ny faharetana
JerryRigEverything dia nandray ny OnePlus 8T ary nametraka izany tamin'ny fitsapana mafy ho an'ny tanjaka sy ny faharetana.
Ity ny vidin'ny charger 65W an'ny OnePlus 8T
Jereo hoe inona ny vidin'ny charger 65 W mahery sy haingana entin'ny OnePlus 8T vaovao isam-paritra.
OnePlus 8T ofisialy: tonga ny finday vaovao miaraka amina famandrihana haingana 65 W ary efijery 120 Hz
Ny OnePlus 8T no finday avo lenta finday avo lenta natomboka tamin'ny fampisehoana 120Hz sy famenoana haingana 65W.
Dika vaovao roa an'ny OnePlus Nord no haseho amin'ny 14 Oktobra miaraka amin'ny OnePlus 8T
Amin'ny 14 Oktobra, ny elanelan'ny OnePlus Nord dia hitarina miaraka maodely roa vaovao hahatratra mpanjifa mety ho maro.
Ny fanavaozana marim-pototra ny Android 11 miorina amin'ny OxygenOS 11 dia manomboka tonga amin'ny OnePlus 8 sy 8 Pro
Ny OnePlus 8 sy 8 Pro dia manomboka mahazo ny fanavaozana rindrambaiko Android 10 miorina eo ambany OxygenOS 11.
OnePlus dia mizara sary nalaina tamin'ny OnePlus 8T sy ny maody amin'ny alina
Tonga tamin'ny hazavana i OnePlus hizara sary nalaina tamin'ny OnePlus 8T sy ny maody amin'ny alina. Tena tsara ny valiny.
Izay rehetra fantatsika hatreto momba ny 200 euro OnePlus Nord manaraka ary izay azontsika antenaina
Manome tsipiriany momba ny famoahana sy tsaho rehetra nipoitra momba ny finday OnePlus manaraka izahay, izay ho tonga Nord vaovao tsy ho ela.
Ny OnePlus Nord sy OnePlus 7 dia mahazo ny patch security September
Ny OnePlus 7 sy Nord dia mandray ny fanavaozana lozisialy vaovao izay manampy ny patch security farany.
Ny OnePlus 5 sy 5T dia miandry fanavaozana lehibe, saingy izany dia nahemotry ny olana iray
Ny OnePlus 5 sy 5T dia miandry fanavaozana vaovao lehibe. Nahemotra izany noho ny olana iray.
Tonga ny OnePlus 8T, ary manamafy izany amin'ny fomba ofisialy ny orinasa
Vonona handray anao izahay amin'izay ho iray amin'ireo terminal farany avo lenta amin'ny taona. Mazava fa miresaka momba ny OnePlus 8T izahay.
Ny sary miaina OxygenOS 11 izay azontsika rehetra ampiasaina mba hankafizantsika ny fiaviana tany am-boalohany amin'ny Android.
Telefaona 200 Euro OnePlus mora vidy hita ao amin'ny Geekbench
Toa vonona ny OnePlus handefa ny findainy ambany indrindra izay mety manana vidiny 200 euro eo ho eo. Ity dia niseho tamin'ny Geekbench.
Ka OnePlus dia nanatsara ny OxygenOS 11 ho an'ny fampiasana tanana iray hafa amin'ireo finday
Optimised amin'ny fampiasana finday amin'ny tanana iray, OnePlus dia manazava ny fandinihana natao tao amin'ny OxygenOS 11.
Ny OnePlus dia afaka niditra an-tsokosoko tamin'ny finday ambany latsaka ny 200 euro
Toa tsy ho ela ny OnePlus dia handefa smartphone finday avo lenta vaovao, iray izay ho tonga toy ny OnePlus Clover.
OnePlus Nord aza mora vidy kokoa ary miaraka amin'ny Snapdragon 460? Ity no ho avy amin'ity taona ity
Araka ny fivoahana farany iray, OnePlus dia handefa smartphone vaovao Nord vetivety miaraka amin'ny Snapdragon 460.
Ny OnePlus 8 sy 8 Pro dia mahazo ny patch patch aogositra miaraka amin'ny fanatsarana isan-karazany
Tonga ny fanavaozana rindrambaiko vaovao ho an'ny OnePlus 8 sy 8 Pro. Manampy fanatsarana sy fanamboarana bibikely isan-karazany izy io.
Azo atao izao ny manova horonantsary 4K amin'ny 60 fps miaraka amin'ny fampiharana OnePlus Gallery noho ny fanavaozana vaovao
Ny fampiharana OnePlus Gallery dia nahazo fanavaozana vaovao ihany tamin'ny farany izay manampy ny fanovana horonantsary 4K amin'ny 60fps sy maro hafa.
Nahazo fanavaozana OTA vaovao ny OnePlus Nord: tonga ny OxygenOS 10.5.4 miaraka amin'ny fanatsarana maro
Ny OnePlus Nord dia mandray ny fanavaozana ny OTA vaovao izay manampy ny OxygenOS 10.5.4 miaraka amin'ny fanatsarana sy fanatsarana isan-karazany.
Afaka milalao PUBG Mobile amin'ny 90 fps ianao izao raha manana OnePlus
Manomboka anio ka hatramin'ny 6 septambra, ny mpampiasa OnePlus rehetra izao dia afaka mankafy PUBG Mobile amin'ny 90 fps.
Ny OnePlus 6 sy 6T dia havaozina miaraka amin'ny patch fiarovana Jolay sy ny fanohanana ny OnePlus Buds
Ny OnePlus 6 sy 6T dia mahazo fanavaozana lozisialy vaovao izay manampy ny OxygenOS 10.3.5 miaraka amina fanatsarana sy fanamboarana bug.
OnePlus dia hanohy hiloka amin'ny elanelam-potoana, ary noho izany dia handefa finday miaraka amin'ny Snapdragon 690 izy
Araka ny fahitana vaovao, dia hamoaka finday miaraka amin'ny Snapdragon 690 i OnePlus tsy ho ela hanohy hanana ny toerany eo afovoany.
Sintomy ny sary mombamomba ny OnePlus Nord vaovao
Raha te-hisintona ireo sary mihetsika 8 vaovao avy amin'ny OnePlus Nord ianao dia afaka manao izany amin'ity lahatsoratra ity.
OnePlus Nord dia mipoitra ao amin'ny GeekBench: Hambara amin'ny 21 Jolay
OnePlus dia hanolotra ny findainy Nord vaovao amin'ny 21 Jolay, fitaovana avo lenta. Amin'ny hetsika mivantana izany.
Ny fakantsary an'ny OnePlus 8 Pro dia ao amin'ny 10 voalohany anio [Review]
DxOMark dia nametraka ny fakan-tsary OnePlus 8 Pro tamin'ny fitsapana. Ao anatin'ny top 10 amin'ny filaharana amin'ny sehatra izy io, iray amin'ireo tsara indrindra.
OnePlus dia mikasa ny hanao fahagagana antsika amin'ny OnePlus 8T sy ny fiampangana azy haingana 65 W
Vaovao vaovao no nipoitra milaza ny OnePlus 8T dia hamely ny tsena amin'ny haitao haingam-pandeha haingam-pandeha 65W.
Ny fisehoan'ny fakan-tsary, ny fanatsarana ary ny maro hafa dia tonga ao amin'ny OnePlus 8 miaraka amin'ny fanavaozana vaovao
Ny andiany OnePlus 8 dia mahazo fanavaozana lozisialy vaovao izay manampy fanatsarana manan-danja marobe sy fiasa vaovao.
Ny OnePlus 7 sy 7T dia mahazo kinova OxygenOS vaovao: firaketana amin'ny 960 fps eo amin'ireo zava-baovao
Ny OnePlus 7 sy 7T dia mandray ny fanavaozana ny OxygenOS vaovao izay manampy fanatsarana maro sy endrika vaovao.
Ny fanavaozana Android 10 marin-toerana dia navotsotra ihany ho an'ny OnePlus 5 sy 5T
Fanavaozana vaovao izay manampy Android 10 marin-toerana dia navotsotra farany ho an'ny OnePlus 5 sy 5T, sainan'ny 2017.
Ahoana ny fomba hamohana ny ekipan'ny Dolby Atmos amin'ny OnePlus 8, OnePlus 7T ary OnePlus 7
Ny mpikambana XDA iray dia afaka nanokatra ny famahanana Dolby Atmos EQ feno ho an'ny OnePlus 8, 7T, ary 7.
OnePlus dia manavao indray ny fizarana fanontaniany sy ny valiny amin'ny fanontaniana vaovao voavaha
OnePlus, tamin'ny alàlan'ny forum, dia namoaka andiana fanontaniana vaovao miaraka amin'ny valiny tsirairay avy mba hanazavana ny maro amin'ireo fisalasalana lehibe.
OxygenOS 10.3.3 amin'ny kinova farany misy azy ho an'ny OnePlus 6 sy OnePlus 6T
Ny OnePlus 6 sy OnePlsu 6T dia efa afaka misintona ny fanavaozana farany izay horaisin'ny terminal roa, tsy manisa ireo mifandraika amin'ny patch patch.
Ahoana ny fomba hampandehanana ny maody mihetsika miadana 960fps ho an'ny horonantsary 4K amin'ny OnePlus 7T
OnePlus dia namoaka fanavaozana vaovao ho an'ny OnePlus 7T, izay manampy maody mihetsika 960fps miadana sy fandraketana horonantsary malalaka.
OnePlus Z dia ho tonga miaraka amin'ny processeur Snapdragon 765
OnePlus Z dia hisolo ny OnePlus 8 Lite tsaho, mirehareha amin'ny fifandraisana haingam-pandeha ary ny vidiny tsy dia lafo loatra.
Google Stadia dia mifanaraka amin'ny OnePlus 8 sy OnePlus 8 Pro
Ny sehatra lalao video streaming an'i Google dia nanampy fotsiny ny OnePlus 8 sy OnePlus 8 Pro ho toy ny fitaovana mifanentana.
OnePlus dia mandefa ny beta voalohany an'ny Android 10 ho an'ny OnePlus 5 sy 5T
Mifanaraka amin'ny fampanantenany, OnePlus dia namoaka ny OxygenOS 10 beta miorina amin'ny Android 10 voalohany ho an'ny OnePlus 5 sy OnePlus 5T.
Ny fanavaozana ny OxygenOS Open Beta 12 dia najanona ho an'ny OnePlus 7 sy 7 Pro
OxygenOS Open Beta 12 dia nivadika fiasco tanteraka. Betsaka ny singa OnePlus 7 sy 7 Pro izay voasakana amin'ity firmware ity.
Doka mahatsikaiky nataon'i Robert Downey Jr. izay nampiroborobo ny OnePlus 8
Ity no fanambarana maneso sy mahaliana izay nosoratan'i Robert Downey Jr hanambarana ny OnePlus 8 any Shina
Ity ilay OnePlus 8 Pro ao anatiny: voadidy tsara [+ Video]
JerryRigEverything dia namoaka horonantsary vaovao izay ny OnePlus 8 Pro no mahery fo. Ao amin'ny fitaovana fanaparitahana azy dia mampiseho ny atin'ny finday.
Ny OnePlus 8 sy 8 Pro dia mahazo ny fanavaozana ny lozisialy voalohany
Ny fanavaozana ny rindrambaiko voalohany ho an'ny OnePlus 8 sy 8 Pro dia efa natolotra tamin'ny alàlan'ny OTA. Izy io dia miaraka amin'ny fanovana sy fanatsarana maro.
Ny OnePlus 8 Pro dia tafavoaka velona amin'ny fitsapana maharitra maharitra an'i JerryRigEverything
Ilay youtuber malaza JerryRigEverything dia miatrika ilay OnePlus 8 Pro vaovao amin'ny fitsapana mafy ny fanoherana sy ny faharetany.
OnePlus 8 sy OnePlus 8 Pro dia ofisialy: fampisehoana 90/120 Hz, fakan-tsary premium ary fifandraisana 5G
OnePlus dia nanatanteraka ny fampanantenan'ny famoahana finday avo lenta roa miaraka amin'ny vidiny ambany ...
Naseho tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny horonan-tsary: ​​io no endrik'ilay OnePlus 8
Alohan'ny hanolorana sy hanombohana ny OnePlus 8 ny 14 aprily ho avy izao dia efa naseho ilay horonantsary mampiseho ny endriny ofisialy.
Ny vidiny sy ny tsipiriany ao amin'ny OnePlus 8 sy 8 Pro: ny vaovao izay ho ofisialy dia voasivana
Alohan'ny hamoahana azy ireo amin'ny 14 aprily ho avy izao, dia navoaka ny fampahalalana momba ny vidiny sy ny antsipirian'ny OnePlus 8 sy 8 Pro.
Ny fanavaozana ny OxygenOS Open Beta 6 dia azo alaina amin'ny OnePlus 6 sy 6T
OnePlus dia namoaka fonosana firmware vaovao misy ny fanavaozana OxygenOS Open Beta 6 ho an'ny OnePlus 6 sy 6T.
Azo alaina izao ny fanavaozana ny fiarovana ny volana martsa ho an'ny OnePlus 7T
Ny fanavaozana ny volana martsa ho an'ny OnePlus 7T sy 7T Pro dia efa misy ary misy ny patch patch ho an'io volana io.
Ny andiany OnePlus 7 dia nahazo patch patch tamin'ny volana martsa sy fanamboarana bibikely vaovao
Ny OnePlus 7s dia mahazo fanavaozana lozisialy vaovao manatsara ny rafitra, manampy fanamboarana bibikely kely vaovao, sy maro hafa.
Ny OnePlus 8 dia mitentina latsaky ny $ 1,000, hoy ny CEO an'ny orinasa
Ny vidin'ny OnePlus 8 dia nasehon'ny CEO sy ny mpanorina ny mpanamboatra sinoa tamina fivoarana farany: ho latsaky ny 1,000 $ io.
Nanamafy tamin'ny fomba ofisialy ny Snapdragon 865 ho an'ny OnePlus 8, ary koa LPDDR5 RAM sy UFS 3.0 ROM
OnePlus dia manamafy ny fampiasana ny Snapdragon 865 ho an'ny andiany OnePlus 8, izay haseho afaka roa herinandro eo ho eo.
Ity sarin'ny OnePlus 8 ity dia manamafy ny endriny
Hahafantatra tsikelikely ny antsipirian'ny vaovao momba ny OnePlus 8 Pro izahay. Efa naneho anao ny sary voalohany izahay ...
OnePlus dia nampanantena fampiasa foana amin'ny fanavaozana OxygenOS ho avy
OnePlus dia nanambara fa ny endri-javatra Always-On dia ho tonga amin'ny findain'ny marika tsy ho ela amin'ny alàlan'ny fonosana firmware vaovao OxygenOS.
Tahaka izany ny fijerin'ny OnePlus 8 Pro loko maitso amin'ny sary vao navoaka
Efa manakaiky kokoa ny fahazoantsika ny fandefasana ny andiam-peon'ny OnePlus manaraka, izay ...
Ny fanavaozana beta vaovao an'ny OnePlus 7T sy 7T Pro dia manampy ny fandikan-teny eo noho eo
Araka ny fanambarana ofisialy vaovao, ny OnePlus 7T sy 7T Pro dia mandray fanavaozana beta vaovao avy amin'ny OxygenOS.
OxygenOS Open Beta 11 dia manomboka tonga amin'ny OnePlus 7 sy 7 Pro
Misy tatitra maromaro izay manondro fa ny fanavaozana ny OxygenOS Open Beta 11 dia manomboka mandondona ny varavaran'ny OnePlus 7 sy 7 Pro.
OnePlus 8 sy OnePlus 8 Pro dia sarany lafo amin'ny fanampiana 5G
Ny tsipika OnePlus 8 dia hanao ny hafainganam-pandeha amin'ny fifandraisana 5G ary miaraka aminy ny fiakaran'ny vidiny. Hiseho amin'ny volana ho avy izy ireo.
Ny OnePlus 7 Pro 5G farany nahazo ny fanavaozana Android 10
Ny OnePlus 7 Pro 5G dia efa mandray fanavaozana vaovao, iray izay tonga amin'ny OxygenOS 10.0.4 ary manampy Android 10 OS.
Ny OnePlus 8 dia haseho amin'ny 14 aprily ary ahitana modely 3
Ny tsaho farany mifandraika amin'ny OnePlus 8, dia manome sosokevitra fa amin'ny 14 aprily dia haseho amin'ny fomba ofisialy izy, ary manampy kinova Lite ho faritra fidirana
Ny efijery OnePlus 8 dia ho tonga miaraka amin'ny zava-baovao andrasana indrindra
Navoaka tamin'ny sary ny sarin'ny telefaona izay ahitantsika fahagagana mahaliana amin'ny efijery OnePlus 8.
DxOMark dia manome isa ny OnePlus 7T Pro ho iray amin'ireo finday avo lenta miaraka amin'ny fakantsary tsara indrindra amin'izao fotoana izao [Famerenana fakan-tsary]
Ny fakantsary OnePlus 7T Pro dia notsapaina sy notombanan'ny DxOMark. Aorian'ny fitsapana, nomen'ny sehatra an-tsekoly azy ho iray amin'ireo tsara indrindra.
Ny fampisehoana ny OnePlus 8 dia ho hafa noho ny Coronavirus
Noho ny virus coronavirus dia toa tandindomin-doza ny fampisehoana ny Oneplus 8. Ny CEO ihany no mitady safidy hahitana vahaolana. Inona no hataon'izy ireo?
Ny OnePlus 7T dia raisina amin'ny farany ary mahazo ny fanavaozana farany OxygenOS
OnePlus dia manolotra anao ny fanavaozana ny OxygenOS vaovao ho an'ny OnePlus 7T izay manampy ny patch security janoary 2020.
Ny OnePlus 7, 7 Pro ary 7T Pro dia mahazo ny fanavaozana izay manampy ny patch farany azo antoka
Navaozina ny fanavaozana rindrambaiko OxygenOS vaovao ho an'ny OnePlus 7, 7 Pro ary 7T Pro miaraka amin'ny fanatsarana isan-karazany.
Ilay lazaina fa OnePlus 8 dia nandeha namakivaky ny angona Geekbench
Geekbench, ilay sehatra fanandramana malaza, dia nanoratra smartphone iray vaovao. Inoana fa ity ny OnePlus 8.
Ny famoahana vaovao dia manambara ny endrik'ilay OnePlus 8 Pro sy ny sasany amin'ireo famaritana ara-teknika azy
Fivoahana vaovao vaovao amin'ny antsipiriany momba ny sary natolotra an'ny sainan'ny OnePlus 8 Pro sy ny maro amin'ireo endri-javatra mety hitranga sy ny mombamomba azy.
Ny fanavaozana ny Android 10 ho an'ny OnePlus 6 sy 6T dia miverina fanindroany
Ny fanavaozana ny Android 10 dia atolotra fanindroany amin'ny OnePlus 6 sy 6T. Amin'ity indray mitoraka ity dia tokony ho tonga tsy misy hadisoana.
OnePlus dia manome ny antsipiriany ny zava-drehetra momba ny fomba fiasa ananany ho an'ny fakantsary ho avy amin'ny findainy
OnePlus dia nifanakalo hevitra sy nifanakalo hevitra momba ny drafitra maro momba ny fanatsarana fakan-tsary ho an'ireo finday miaraka amin'ireo mpampiasa azy amin'ny alàlan'ny New York OEF.
OxygenOS 10.3.1 dia tonga amin'ny OnePlus 6 / 6T miaraka amina fanamboarana maro
Ny OnePlus 6 sy OnePlus 6T dia mahazo ny fanavaozana farany OxygenOS, kinova laharana 10.3.1. Izy io dia miaraka amina fanamboarana maro.
Ny OnePlus 8 Pro dia hirehareha amin'ny fanohanana ny famandrihana Wireless
Smartphone iray hafa lehibe tsara indrindra hanombohana amin'ity taona ity dia ny OnePlus 8 Pro. Inona no vaovao milaza fa hisy ny famandrihana tsy misy tariby.
Ny OnePlus 8 dia hampiditra tontonana 120 Hz
Ny taranaka manaraka an'ny OnePlus, laharana faha-8, dia hampiditra efijery 120 Hz, hoy ny talen'ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny orinasa.
OnePlus dia mampiseho ny efijery "Fluid Display" 120Hz ho an'ny OnePlus 8
Novokarin'i Samsung, mampanantena zavatra betsaka ny efijery OnePlus 8 ary ho tsara indrindra amin'ny taona 2020 raha ny filazan'ny filohany manokana Lau.
Ny OnePlus 8 Pro dia miseho miaraka amin'ny RAM 12GB ao amin'ny Geekbench
Alohan'ny hisian'ny hetsika fandefasana ny OnePlus 8 Pro dia efa nitanisa ny sasany amin'ireo famaritana ara-teknika azy ny Geekbench.
Ireo sary voalaza fa OnePlus 8 Lite dia nipoitra ary mampiseho ny endriny rehetra
Sary roa an'ilay voalaza fa OnePlus 8 Lite no tafaporitsaka an-tserasera, nanambara sy nandà ny antsipiriany sasany teo aloha momba ny hatsaran'ny terminal.
Natomboka ny fihodinana fahatelo amin'ny fanavaozana Android 10 ho an'ny OnePlus 6 sy 6T
Ny OnePlus 6 sy 6T izay mahazo fanavaozana ny rafitra fiasa Android 10 fanintelony.
Ny fanavaozana farany ny OnePlus 7 sy 7 Pro dia mamerina ny fiasa "Afeno takona"
Ny OnePlus 7 sy 7 Pro dia mahazo fanavaozana vaovao izay manampy fanatsarana isan-karazany ary manampy zavatra izay najanon'ny orinasa hatolotra azy ireo intsony.
Ny fanavaozana ny OxygenOS 10.0.5 dia tonga ao amin'ny OnePlus 7T Pro miaraka amin'ny fanatsarana isan-karazany
Ny OnePlus 7T Pro dia mandray fanavaozana vaovao izay manampy ny fonosana firmware izay tonga toy ny OxygenOS 10.0.5.
Iza amin'ireo finday avo lenta izay manolotra kalitaon'ny firaketana feo avo indrindra
Lafin-javatra iray izay tena vitsy ny olona no misaina rehefa misafidy finday avo lenta dia ny kalitaon'ny fandraisam-peo.
OnePlus 7T dia mandray OxygenOS 10.0.7 miaraka amin'ny fanatsarana ny fakan-tsary sy ny patch patch ho an'ny volana Novambra
Raha mbola maro ireo mpampiasa no miandry ny vahaolana amin'ny fisehoan'ny famirapiratanana "hit na miss" amin'ny OnePlus 7T sy ...
Ny famirapiratan'ny "tsy fantatra mialoha" an'ny OnePlus 7T sy 7T Pro dia miteraka mpampiasa maro
Ny lesoka iray izay nanomboka nisy fiatraikany tamin'ny mpampiasa OnePlus 7T sy 7T Pro dia misy ifandraisany amin'ny famirapiratan-javatra ampifanarahana,
Ny OnePlus 7 sy 7 Pro dia mahazo ny patch farany azo antoka sy ireo fanatsarana isan-karazany amin'ny alàlan'ny fanavaozana vaovao
Ny OnePlus 7 sy 7 Pro dia mahazo fanavaozana lozisialy vaovao izay manampy ny OxygenOS 10.0.3 miaraka amina fanamboarana maro hafa sy maro hafa.
OnePlus 8 Lite dia aseho amin'ny fandikana voalohany
Ny fandikan-teny voalohany amin'ny OnePlus 8 Lite dia voasivana, telefaona iray izay ho tonga any amin'ny telovolana faharoa amin'ny 2020 toy ny OnePlus 8 sy Pro.
Ny fanavaozana Android 10 dia atolotra indray amin'ny OnePlus 6 sy 6T aorian'ny fiatoana amin'ny fizarana azy
Ny OnePlus 6 sy 6T dia efa mandray ny rafitra fiasan'ny Android 10 indray aorian'ny fanamboarana olana maro samihafa izay voalaza fa samy hafa.
Ny fifanarahana amin'ny finday avo lenta sy finday tsara indrindra amin'ny alatsinainy cyber
Ny Alatsinain'ny Cyber ​​no fotoana farany ananantsika hanararaotra ny herinandron'ny Zoma Mainty, ny herinandro izay mifarana anio.
Ny beta farany ho an'ny daholobe OxygenOS 10 an'ny OnePlus 6 sy 6T dia mitondra fanamboarana bibikely sy fanatsarana fakan-tsary
Raha mahazo fanavaozana Android 9 Pie ny fitaovana sasany ankehitriny, ny OnePlus dia mamoaka fanavaozana beta hafa miorina ...
Raha mpampiasa OnePlus ianao dia mety hahazo mailaka spam noho ny fivoahan'ny data
Ny mpikambana iray ao amin'ny ekipa fiarovana OnePlus, tamin'ny alàlan'ny forum ofisialin'ny orinasa, dia nilaza fa niharan'ny fanitsakitsahana fiarovana izy ireo.
Ireto ny tetik'ady amin'ny OnePlus 8 Pro izay manivana ny fakantsary quad sy ny estetika
Nisy fivoahana vaovao nipoitra izay misy tetikady marobe amin'ny sainan'ny OnePlus 8 Pro mampiseho izany amin'ny fomba feno.
Android 10 amin'ny endriny milamina dia manitatra ny mpampiasa OnePlus 7 sy 7 Pro miaraka amin'ny Hydrogen OS
Android 10 amin'ny endriny marin-toerana ao anatin'ny Hydrogen OS dia tonga ao amin'ny OnePlus 7 sy 7 Pro avy any Sina amin'ny alàlan'ny fanavaozana vaovao.
Ny OnePlus 7 Pro misy RAM 6 GB miaraka amina memoara 128 GB sy RAM 12 GB misy ROM 256 GB dia tsy amidy intsony any Etazonia.
Ny OnePlus 8 Pro dia mety haneho fampisehoana 120Hz
Ny tsaho farany dia milaza fa ny taranaka manaraka amin'ny laharana One Plus Pro dia hamely ny tsena amin'ny efijery 120Hz
OnePlus dia hanohy hanolotra maodely roa amin'ny fotoana iray
Fantaro misimisy kokoa momba ny fanamafisana avy amin'ny CEO OnePlus fa hanohy hampiditra telefaona roa isaky ny taranaka vaovao tonga izy ireo.
Ny OnePlus 6T dia manomboka mahazo Android 10 milamina
Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana ny Android 10 ho an'ny OnePlus 6T izay manomboka mandray ny OTA miaraka amin'ny kinova miorina amin'ny fomba ofisialy.
Ny OnePlus 8 sy 8 Pro dia haseho amin'ny telovolana faharoa amin'ny 2020
Araka ny fanambaran'ny mpanolotsaina fanta-daza, ny OnePlus 8 sy 8 Pro manaraka dia ho lasa ofisialy amin'ny telovolana faharoa amin'ny 2020.
Ny OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition dia efa nambara, saingy eo ambanin'ny fanalaviran'ny T-Mobile ihany.
OnePlus dia nanambara ny fanontana 7T Pro McLaren Edition miaraka amin'ny mpitatitra amerikana T-Mobile fotoana fohy.
Ny OnePlus 7T sy 7T dia manolotra serivisy rahona 50 GB maimaim-poana ho an'ny galeriana noho ny fanavaozana vaovao
Ireo mpampiasa flagship OnePlus 7T sy 7T Pro dia mahazo fonosana firmware vaovao miaraka amin'ny serivisy cloud maimaimpoana (India ihany).
Ny OnePlus 6 sy ary 6T dia mahazo ny beta an'ny Android 10 amin'ny alàlan'ny fanavaozana OTA vaovao
OnePlus dia mamoaka ny topi-maso Android 10 eo ambanin'ny OxygenOS ho an'ny sainanam-pirenena OnePlus 6 sy 6T manerantany.
Smartphone finday iray-mode OnePlus 5G hanomboka amin'ny faran'ity taona ity
Liu Zuohu, mpanorina sy CEO an'ny Plus, dia nanamarika tamin'ny resadresaka nifanaovana tamina mpanadihady fa handefa finday 5G miaraka amin'ny mpanamboatra faran'ny taona ity.
Mandika voalohany ny mety ho endrik'ilay OnePlus 8 Pro
Atorinay anao ny fandikana voalohany ny mety ho toa ny OnePlus 8 Pro, fitaovana hanala ny fakantsary azo esorina amin'ny fitaovana.
Ny OnePlus 7 sy 7 Pro dia mandray ny fanavaozana OxygenOS Open Beta 3 miorina amin'ny Android 10
Ny OnePlus 7 sy 7Pro dia mahazo fanavaozana vaovao amin'ny endrika beta ary miaraka amin'ny Android Pie izay manampy fanatsarana sy vaovao marobe.
Ny fanavaozana ny Android 10 ho an'ny OnePlus 7 sy 7 Pro dia miverina indray
Fantaro bebe kokoa momba ny famerenana amin'ny laoniny ny fanavaozana ny Android 10 ho an'ny OnePlus 7 sy 7 Pro rehefa avy nanana olana maro tato anatin'ny herinandro.
Izao no fotoana mety indrindra hividianana ny varotra OnePlus 7 mora avy any Amazon!
Ankehitriny, izao no fotoana mety indrindra hividianana ny Buy OnePlus 7 mora. Ary, ny goavambe aziatika dia nampidina ny vidin'ny sainam-pireneny ao Amazon.
Ny OnePlus 7T Pro sy OnePlus 7T dia tonga ara-panjakana any Espana
OnePlus dia nanambara ny OnePlus 7T sy 7T Pro vaovao ho an'ny Eropa sy Espana. Mazava ho azy, tafiditra ao koa ny fanontana McLaren an'ny OnePlus 7T Pro.
Ny fanavaozana efa nandrasana hatry ny ela an'ny OnePlus 7 Pro dia eto ary manome vaovao kely momba ny maodely soloiny.
Namoaka ny vidiny ofisialy an'ny OnePlus 7T, mendrika ny vidinao ve izany?
Navoaka ny vidin'ny OnePlus 7T, finday avo lenta mamaky tany ary manolotra mpamono sainam-pirenena. Ary hisy ny fanontana McLaren!
Ny OnePlus 7T Pro dia hanana fanontana McLaren manokana
Mpanamboatra Aziatika OnePlus hamoaka kinova manokana an'ny OnePlus 7T Pro eo ambanin'ny marika mpanamboatra fiara fanatanjahan-tena McLaren
Ny OnePlus 7T dia manatsara ny fakan-tsariny amin'ny fanavaozana voalohany
Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana voalohany izay efa navotsotra ho an'ny OnePlus 7T izay nanatsara ny fakan-tsarin'ny fitaovana sahady.
Ny OnePlus 7T dia handraikitra amin'ny hetsika miadana be amin'ny 960 fps noho ny fanavaozana ny ho avy
OnePlus dia nanambara fa ny OnePlus 7T dia hahazo fanavaozana amin'ny ho avy izay hanampy fanohanana amin'ny firaketana horonantsary miadana be amin'ny 960 fps.
Ny antsipiriany rehetra momba ny OnePlus 7T, ny sainam-pirenenan'ilay mpanamboatra Aziatika tonga tonga manjaka amin'ny famonoana azy
Fantaro bebe kokoa momba ny daty izay hananan'ny telefaona OnePlus fanavaozana ny Android 10, nohamafisin'ny orinasa tenany ihany.
Ny fanavaozana OnePlus 7 sy 7 Pro amin'ny Android 10
Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana ny Android 10 izay efa natomboka tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny OnePlus 7 sy 7 Pro any amin'ny firenena sasany manerantany.
Ny OnePlus 7T dia nanatsara ny famandrihana haingana
Jereo ny fanatsarana rehetra atolotray ao amin'ny Warp Charge 30T, ny fiampangana haingana kokoa an'ny OnePlus 7T izay handoa haingana kokoa noho ny OnePlus 7 Pro.
Ireto ny sary ofisialy an'ny OnePlus 7T natolotry ny talen'ny talen'ny orinasa
Ny CEO CEO OnePlus, Pete Lau, dia namoaka ireo sary ofisialy nomen'ny OnePlus 7T, ny sainam-pirenena manaraka.
Ny OnePlus 7T dia efa manana daty fampisehoana ofisialy
Fantaro bebe kokoa momba ny daty fanolorana ofisialy an'ny OnePlus 7T izay efa nohamafisin'ny marika tamin'ny fomba ofisialy.
OnePlus dia manamafy fa ny finday avo lenta rehetra ho avy dia hanana fampisehoana 90 Hz
Ny vaovao vaovao dia manamarika fa ny finday rehetra OnePlus amin'ny ho avy dia hanana fampisehoana tahan'ny famelomana 90Hz.
Namoaka daty fampisehoana vaovao ho an'ny OnePlus 7T sy 7T Pro
Fantaro bebe kokoa momba ny fotoana hanolorana amin'ny fomba ofisialy ny OnePlus 7T sy 7T Pro satria efa afaka nahafantatra tamin'ny fomba ofisialy isika.
Ny tsipiriany rehetra an'ny OnePlus 7T Pro sy OnePlus 7T dia mivoaka
Raha miandry ny fandefasana ny taranaka manaraka amin'ny One Plus 7 ianao hahafantatra ny pitsopitsony, amin'ity lahatsoratra ity dia hasehonay anao izy ireo.
Ny OnePlus 7T dia hanana efijery 90 Hz
Fantaro bebe kokoa momba ny fampiasana fampisehoana tahan'ny famelomana 90Hz amin'ny OnePlus 7T izay nohamafisin'ny Tale Jeneralin'ilay mpanamboatra sinoa.
OnePlus handefa smartphone miaraka amin'ny efijery 90Hz mora kokoa noho ny OnePlus 7 Pro
Fitaovana iray hafa misy efijery 90 Hz no saika hasiana tsena, ary avy amin'ny OnePlus izy io. Izany dia efa nambaran'ny Tale jeneralin'ny orinasa.
Ny Android 10 beta ho an'ny OnePlus 6 sy 6T dia ho tonga amin'ny faran'ny volana septambra
Tamin'ny 3 septambra lasa teo, ny bandy avy amin'ny Google dia nandefa ilay Android Android 10 nandrasana hatry ny ela, andiany iray izay ...
Ny OnePlus 7T dia nandeha namakivaky ny Geekbench mba hamantatra ny sasany amin'ireo famaritana azy
Geekbench dia nanoratra ny OnePlus 7T tamin'ny sehatry ny andrana ary nanambara ny sasany amin'ireo fiasa amin'ity finday ity.
OnePlus dia mamoaka ny fampiharana Zen Mode ao amin'ny Play Store hamehezana ny fahazaran-dratsy
OnePlus dia namoaka ny fiasa Zen Mode an'ny OnePlus 7 ho fampiharana mitokana ao amin'ny Google Play Store hanampiana amin'ny famerana ny fahazaran-dratsy.
Ny OnePlus 7T dia ho avy miaraka amin'ny efijery 90 Hz sy ny famahana ny 2K
Ny fiasa lehibe sy ny famaritana ny OnePlus 7T dia niseho tamin'ny Internet; ireo dia manonona efijery 90HZ lehibe sy famahana 2K.
Toy izao ny fijerin'ny OnePlus 7T amin'ny lafiny rehetra [+ Video-render]
Ny OnePlus 7T dia mipoitra amin'ny famoahana horonantsary anehoana ny hatsarany rehetra, ary amin'ny lafiny rehetra. Jereo ny endriny!
Sivanina ny masontsivana voalohany an'ny OnePlus Smart TV
Fantaro misimisy kokoa momba ireo pitsony voalohany izay efa navoaka momba ny OnePlus Smart TV izay hanomboka amin'ity fararano ity.
Ny OnePlus Smart TV dia hamely ny tsena amin'ity fararano ity
Fantaro bebe kokoa momba ny fanombohana ny OnePlus Smart TV izay nohamafisin'ny marika fa ho tonga amin'ny fomba ofisialy amin'ny volana septambra.
Ny OnePlus 7T dia hotantanan'ny Snapdragon 855 Plus
Ny taranaka manaraka an'ny OnePlus 7 dia tsy hitovy amin'ilay ankehitriny ampiasain'ny processeur ampiasaina: Snapdragon 855 Plus
OnePlus handefa telefaona 5G alohan'ny faran'ny taona
OnePlus dia handefa ny telefaona voalohany miaraka amin'ny 5G alohan'ny faran'ity taona ity, satria ny tale jeneralin'ny orinasa dia efa nanamafy tamin'ny tambajotran-tseraserany.
Ny OnePlus 7T Pro dia mety efa nanana daty fampisehoana
Fantaro misimisy kokoa momba ny daty fampisehoana an'ny OnePlus 7T Pro izay efa navoaka tamina haino aman-jery isan-karazany ary ity taona ity dia hametraka tsy ampoizina.
Ny fanavaozana vaovao ho an'ny OnePlus 6 sy 6T dia manampy ny asan'ny OnePlus 7 Pro
Ny fanavaozana rindrambaiko vaovao dia manomboka tonga amin'ny OnePlus 6 sy 6T rehetra. Izy io dia miaraka amin'ny endri-javatra vaovao sy endrika vaovao an'ny OnePlus 7 Pro.
Navoaka ny sary mivantana vaovao an'ny OnePlus 7T Pro
Averina indray, sary marobe marobe no tafaporitsaka tamin'ilay toa ilay OnePlus 7T Pro, ilay sainam-pirenena ho avy.
OnePlus dia manomana fahitalavitra 4 miaraka amin'ny Android TV
Fantaro bebe kokoa momba ny drafitra OnePlus handefa televiziona efatra miaraka amin'ny Android TV ho toy ny rafitra miasa izay novolavolain'izy ireo ankehitriny.
Ireo sary voalaza fa tena sarin'ny OnePlus 7T Pro dia niseho tamin'ny alàlan'ny fanivanana. Tsy manambara vaovao lehibe izy ireo, amin'ny resaka famolavolana.
Ny OnePlus 7 Pro dia mahazo fanavaozana lozisialy vaovao izay mamelombelona ny OxygenOS ho amin'ny kinova 9.5.11.
Nahazo fanavaozana vaovao ny OnePlus 7 Pro: manatsara kokoa ny fakan-tsariny ary faritra hafa koa
Ny OnePlus 7 Pro dia mahazo fanavaozana lozisialy vaovao izay manatsara ny fakan-tsary sy ireo faritra hafa. Izany dia eo ambanin'ny OxygenOS kinova 9.5.9.
Ny fanavaozana vaovao OxygenOS 9.5.5 an'ny OnePlus 7 Pro 5G dia manome fanatsarana betsaka
Nisy fanavaozana firmware vaovao tonga tao amin'ny OnePlus 7 Pro 5G. Izy io dia avy amin'ny OxygenOS 9.5.5 ary mampihatra fiasa sy fanatsarana vaovao marobe.
Fantaro bebe kokoa momba ny antoka fa hanome ny OnePlus ireo mpampiasa izay mividy telefaona hafarana avy any Sina raha sendra olana.
Tonga tao amin'ny OnePlus 6 sy 6T ilay mpanamory efijery tamin'ny alàlan'ny fanavaozana vaovao
Ny OnePlus 6 sy 6T izao dia mahazo fanavaozam-baovao OxygenOS vaovao izay manampy ny fandraisam-peo, ary koa ny fanatsarana hafa.
Izany no anton'ny hafatra hafahafa izay mahazo ny OnePlus 7 Pro
Ireo hafatra hafahafa amin'ny teny sinoa azon'ny mpampiasa OnePlus 7 Pro any amin'ny firenena sasany dia noho ny olana amin'ny fivoaran'ny OxygenOS
Ny fakantsary OnePlus 7 dia novaina nohavaozina noho ny fanavaozana vaovao
Nihatsara ny fakan-tsary OnePlus 7 noho ny fanavaozana ny lozisialy vaovao izay raisin'ilay sainam-pirenena.
Ny OnePlus 7 Pro Almond Edition dia misy any Espana izao
Fantaro bebe kokoa momba ny fandefasana ity OnePlus 7 Pro Almond Edition izay azontsika atao izao ny mividy amin'ny fomba ofisialy any Espana manomboka izao.
OnePlus dia miresaka momba ny fivoarana sy ireo fiasa vaovao mety tonga ao amin'ny OxygenOS
OnePlus dia namoaka fizarana fanontaniana sy valiny ao amin'ny forum ofisialiny momba ny vaovao momba ny OxygenOS amin'ny ho avy, ary antsipirihany ny zava-drehetra.
Fnatic mode, Digital Wellbeing ary maro hafa dia tonga amin'ny OnePlus 5 / 5T sy 6 / 6T amin'ny beta farany
Ny OnePlus 5 / 5T sy 6 / 6T dia efa manana beta vaovao izay manampy ny mode Fnatic sy ny app Digital Wellbeing, ankoatry ny patch fiarovana Jona 2019.
Navoakan'i OnePlus ny angona mpampiasa "tsy fanahy iniana" tamin'ny alàlan'ny fampiharana 'Shot on OnePlus'
Ny app Shot amin'ny OnePlus dia namoaka ny angona mpampiasa noho ny lesoka ara-piarovana. Efa elaela no nisy an'io, saingy efa namaly ny orinasa.
Ny OnePlus 7 dia mahazo fanatsarana fakan-tsary marobe noho ny fanavaozana vaovao
Ny OnePlus 7 dia mahazo fanavaozana firmware vaovao izay manome anao fanatsarana fakan-tsary isan-karazany, ary koa ny fanamboarana sy fanatsarana ny rafitra.
Ny OnePlus 7 Pro Almond dia efa manana daty fanombohana any Espana
Fantaro bebe kokoa momba ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny OnePlus 7 Pro Almond any Espana satria efa naseho io sy ny daty nanombohany.
Ny OnePlus 7 Pro dia manomboka amin'ny loko vaovao any India
Fantaro bebe kokoa momba ny loko vaovao izay amidy amin'ny fomba ofisialy ao India i OnePlus 7 andro afaka andro vitsivitsy.
Ny fanavaozana ny OxygenOS vaovao an'ny OnePlus 7 Pro dia misy fivoarana lehibe ho an'ny fakantsary
Ny fanavaozana vaovao ho an'ny OnePlus 7 Pro dia efa eny amin'ny rivotra. Ity dia OxygenOS 9.5.7 ary misy fanatsarana lehibe eo amin'ny sehatry ny sary.
OnePlus 7 dia mandray maody Fnatic sy DC manjavozavo amin'ny fanavaozana vaovao
Ny OnePlus 7 dia mahazo OxygenOS 9.5.4. Izy io dia mampihatra endri-javatra maro efa nambara taloha, ary koa fanatsarana sy fanamboarana bibikely.
Tonga any Espana amin'ny fomba ofisialy ny OnePlus 7
Fantaro bebe kokoa momba ny fanombohana ny OnePlus 7 amin'ny fomba ofisialy any Espana. Ny amidy farany ny marika sinoa dia efa amidy eto amintsika.
OnePlus 7 Pro bootloader unlocking dia manala ny fanamarinana Widevine L1
Ny OnePlus 7 Pro dia nahazo fidirana amin'ny faka amin'ny alàlan'ny fanarenana TWRP tsy ofisialy, zavatra iray izay manala ny fanamarinana Widevine L1.
Ny efijery OnePlus 7 Pro dia manana olana amin'ny famotsoran-keloka phantom
Ny mpampiasa sasany dia mitatitra ny olana amin'ny efijery OnePlus 7 Pro: ny tontonana dia manatanteraka tsindry fanalahidy manjary mahatonga ny mpampiasa hanana toetra ratsy.
Ny OnePlus dia manana olana amin'ny famitana ny vatsy ho an'ny OnePlus 7 Pro
Ny OnePlus 7 Pro dia be fangatahana any Shina. Ny lazan'ny sainam-pirenena vaovao dia manery ny orinasa hizara indray ny entany.
Ny OnePlus 5 sy 5T dia havaozina amin'ny Android Q miaraka amin'ny fiasa maro an'ny OnePlus 7 vaovao
Ny mpanamboatra aziatika dia nanamafy tamin'ny fomba ofisialy fa ny OnePlus 5 sy OnePlus 5T dia hahazo Android Q, na dia tsy mamaritra ny daty eo aza.
OnePlus 7 Pro dia mampanantena fa hanatsara ny teboka malemy indrindra. Inona izany?
Nanambara i OnePlus fa miasa amin'ny fanavaozana izy ireo hanatsarana ny fakantsary OnePlus 7 Pro, indrindra ny fakana sary amin'ny alina sy ny fomba HDR.
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny OnePlus 3 sy 3T ny Stable Android Pie
Navoaka tamin'ny OnePlus 3 sy 3T ny kinova Android Pie farany. Atorinay anao ny vaovao entiny!
Ny OnePlus 7 Pro dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana
Fantaro bebe kokoa momba ny fanombohana ny OnePlus 7 Pro any Espana amin'ny fomba ofisialy, izay ahafahantsika mividy an'ity avo lenta ity amin'ny magazay sy amin'ny Internet.
Ny beta fahatelo an'ny Android Q ho an'ny OnePlus 7 sy OnePlus 7 Pro dia efa misy izao
Ny beta fahatelo an'ny Android Q dia azon'ny mpampiasa OnePlus 7 sy OnePlus 7 Pro amin'ny alàlan'ny tranonkalan'ny mpanamboatra.
Sintomy ary apetraho ny APK OnePlus 7 Zen sy ny Screen Recorder APK ho an'ny maodely OnePlus hafa eto
Ny Zen Mode sy ny OnePlus 7 Screen Recorder dia azo alaina ho an'ny maodely telefaona OnePlus taloha noho ireo APK ananantsika eto.
Ny OnePlus 7 Pro dia fahombiazana amin'ny famandrihana
Fantaro bebe kokoa ny fahombiazan'ny famandrihana izay ananan'ny OnePlus 7 Pro hatreto amin'ny tsena, izay nihoatra ny iray tapitrisa dolara.
Saika nanomboka ny orinasa OnePlus no nanjary nalaza tamin'ny tsena niaraka tamin'ny OnePlus One, terminal tsy lafo ...
Ny Zack an'i JerryRigEverything dia nametraka ny OnePlus 7 Pro tamin'ny alàlan'ny fitsapana ara-batana be loatra hanamarinana ny tanjaka sy ny faharetan'ny fitaovana.
Ny OnePlus 7 dia efa zava-misy ary lazainay aminao ny antsipiriany rehetra momba ny fiasa, ny famaritana, ny vidiny ary ny fahafahany.
Ahoana ny fanarahana ny fampisehoana ny OnePlus 7
Fantaro ny fomba hanarahana ny fampisehoana ofisialy ny OnePlus 7 mivantana any London anio tolakandro.
OnePlus dia manamarina ny mari-pahaizana momba ny efijery OnePlus 7 Pro
OnePlus dia efa nanamafy ny tahan'ny famelombelona sy ny refin'ny efijery an'ny OnePlus 7 Pro amin'ireo teasers ofisialy vaovao nalefany.
Ny beta faharoa an'ny Android Pie ho an'ny OnePlus 3 sy 3T dia efa misy izao
Ireo tovolahy ao amin'ny OnePlus dia namoaka ny beta faharoa an'ny Android Pie ho an'ny OnePlus 3 sy OnePlus 3T
Ny vidiny ho an'ny kinova OnePlus 7 Pro rehetra dia naseho
Jereo ny vidiny izay hananan'ny kinova OnePlus 7 Pro rehetra satria efa navoaka tamin'ny fomba ofisialy tato anatin'ireto ora lasa izay.
Ny santionany ofisialin'ny fakan-tsary telo an'ny OnePlus 7 Pro dia manasongadina ny zoom 3x
Efa ananantsika ireo santionany fakan-tsary an'ny OnePlus 7 Pro, izay manasongadina ny zoom 3x izay manome ny maodelin'ny fakan-tsary telo izay avoakany.
Ity sary dokam-barotra ity dia manamafy ny famolavolana ny OnePlus 7 Pro
Azontsika atao ny manamarina ny volavolan'ny OnePlus 7 Pro, ilay telefaona OnePlus vaovao izay hisongadina amin'ny fahatongavany miaraka amina fahagagana amin'ny fakantsary.
OnePlus 7 Pro dia nanamafy fa manana fakantsary aoriana telo
Raha sanatria misy manana fanontaniana momba ny isan'ny fakantsary ao amin'ny OnePlus 7 Pro dia namoaka bitsika iray ity orinasa ity izay manamarina azy ireo amin'ny alàlan'ny horonan-tsary iray.
Ny vidin'ny OnePlus 7 Pro dia voasivana: avy amin'ny 749 euro
Andro iray taorian'ny nanambarana ny daty fanolorana ny OnePlus 7 Pro, Android Central dia namoaka izay mety ho vidiny farany any Eropa.
Mirehareha i OnePlus fa ny efijery an'ny OnePlus 7 Pro manaraka dia ho mpanova lalao, satria mahavariana, ary koa lafo kokoa.
Ny talata no hambara rehefa aseho ny OnePlus 7
Hijery misimisy kokoa momba ny hoe rahoviana no ho fantatray ny daty fanolorana ofisialy an'ny OnePlus 7 araka izay nohamafisin'ny CEO ao amin'ny Twitter.
Ny fakan-tsarimihetsika OnePlus 7 Pro dia tafaporitsaka
Ity ny Camera of the OnePlus 7 Pro, ny sainan'ny OnePlus manaraka izay ho tonga miaraka amin'ny fizarana fakana sary mahagaga. Lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra.
Ny OnePlus 3 sy 3T dia mahazo Android 9 Pie any Eropa
Fantaro bebe kokoa momba ny fanombohana ny Android Pie beta ho an'ny OnePlus 3 sy 3T any Eropa, izay efa nanomboka nivadika.
Ny CEO OnePlus dia mizara teaser ofisialy OnePlus 7
Ny tale jeneralin'ny OnePlus, Pete Lau, dia nizara ilay teaser ofisialy voalohany an'ny OnePlus 7. Ity iray ity milaza fa ny "haingam-pandeha sy malama".
Lahatsary 360 sy fandikan-teny vaovao an'ny OnePlus 7 (ilay kinova mahazatra)
Ireo fandikana vaovao ireo sy horonan-tsary 360 dia mampiseho tsara ny kinova mahazatra an'ny OnePlus 7 izay haseho amin'ny tapaky ny Mey.
Efa fantatsika hoe rahoviana no haseho ny OnePlus 7
Jereo ny daty fampisehoana an'ny OnePlus 7 izay efa tafaporitsaka tato anatin'ny ora vitsivitsy ary hamafiso ny fotoana antenainay ny telefaona.
Manana drafitra handefasana smartphone finday azo soloina ve i OnePlus?
Fantaro bebe kokoa momba ny fikasan'i OnePlus hanangana finday avo lenta azo tsapain-tanana, izay nolazain'ny Tale jeneralin'ny orinasa tamin'ny resadresaka nifanaovana taminy.
Ny CEO CEO OnePlus dia milaza fa tsy mivarotra tsara ireo karazana loko marolafy gradien
Pete Lau dia manana fomba hafa hijerena zavatra. Nilaza izy fa tsy dia mivarotra eny an-tsena ireo variana fitaratra miloko marevaka.
Ny OnePlus 7 dia efa nanana daty fampisehoana
Fantaro bebe kokoa momba ny daty fampisehoana izay azontsika antenaina hananan'ity OnePlus 7 ity satria efa naseho tamin'ny haino aman-jery isan-karazany.
OnePlus 7 Pro tafaporitsaka tamin'ny sary tena izy izay mampiseho ny efijery OLED miolikolika sy ny antsipiriany
us-7 Saripika roa tafaporitsaka an'ny variana mandroso indrindra amin'ny smartphone OnePlus 7 ho avy nipoitra tao amin'ny Weibo manome anay…
Ny fanavaozana OnePlus 3 sy 3T amin'ny Android Pie any Shina
Fantaro bebe kokoa momba ny Android Pie beta izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny OnePlus 3 sy 3T any Shina ary ho avy tsy ho ela any Eropa.
Tsy vao sambany no ahitantsika ny volavolan'ny OnePlus 7. Hatramin'izao dia nanantena modely iray izahay ...
Ny fakan-tsarimihetsika pop-up sy ny triple aoriana an'ny OnePlus 7 dia manjelatra indray noho ny trano fonenan'izy ireo
Ny fandikana vaovao an'ny OnePlus 7 dia nipoitra, fa ny trano fonenany, izay mampiseho ny fakantsary triple aoriana sy ny sensor pop-up ho an'ny selfie.
Mety hisy OnePlus 6T miaraka amin'ny 5G
Fantaro bebe kokoa momba ny mety fanombohana kinova 5G an'ny OnePlus 6T an'ny marika sinoa izay ho avy tsy ho ela eo amin'ny tsena.
Ny mpandika vaovao an'ny OnePlus 7 dia mampiseho ny fakantsary
Fantaro bebe kokoa momba ireo fandikan-teny ireo izay mampiseho aminay ny fakantsarin'ny OnePlus 7 izay havoaka eny an-tsena amin'ny tapany voalohany amin'ity taona ity.
OxygenOS 9.0.4 dia misy amin'ny OnePlus 5 sy 5T izao: hahafahanao mametraka azy io
OnePlus dia nanomboka nanamboatra fanavaozana vaovao ho an'ny OnePlus 5 sy OnePlus 5T tamin'ny faran'ny herinandro. Ny…
Android Pie dia manakaiky kokoa ny OnePlus 3 sy 3T: efa ho tonga amin'ireo telefaona ireo atsy ho atsy
OnePlus dia mpamorona smartphone mitombo haingana izay nanorina ny fakany tao anatin'ny taona vitsivitsy. Nanomboka izy…
Tsy hisy telefaona azo aforitra avy amin'ny OnePlus: ireo no antony
OnePlus dia nanazava ny antony lehibe mahatonga ny orinasa tsy handefa telefaona mivalona, ​​farafaharatsiny ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny OnePlus 7 dia hitohy nefa tsy miloka amin'ny rafitra famandrihana tsy misy tariby
Ny famandrihana tsy misy tariby ao amin'ny OnePlus dia hitohy ho nofinofy ho an'ireo mpampiasa rehetra matoky ity mpanamboatra ity, satria tsy hampiditra azy io koa ny OnePlus 7.
OnePlus dia handefa ny findainy 5G amin'ny telovolana faharoa
Fantaro bebe kokoa ny drafitry ny marika handefa finday misy 5G eny an-tsena amin'ny telovolana faharoa amin'ity taona ity.
Ny OnePlus 6 sy 6T dia mahazo fanavaozana fiarovana vaovao
Fanavaozana vaovao no mivoaka ho an'ny OnePlus 6 sy OnePlus 6T. Ny fanavaozana dia mitondra ny patch security janoary ho an'ireo fitaovana roa.
Ny sasany OnePlus 6T dia manana olana amin'ny bateria
Fantaro bebe kokoa momba ny olan'ny bateria OnePlus 6T izay iainan'ny mpampiasa sasany amin'ny telefaona amin'izao fotoana izao.
Ny OnePlus 5 sy 5T dia mahazo ny kinova Android Pie
Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana ny Android Pie izay tonga amin'ny OnePlus 5 sy 5T izay efa mandray ny kinova miovaova amin'ny rafitra fiasa.
Ny Snapdragon 855 dia miorina ao AnTuTu miaraka amin'ireo tobim-pitsapana hafa ary mihoatra azy ireo
Ny Qualcomm's Snapdragon 855 dia ampitahaina amin'ny AnTuTu miaraka amin'ireo fantsom-pamantarana hafa: mampihoatra azy rehetra amin'ny fampisehoana!
Navoaka ilay sary lazaina fa tena izy an'ny OnePlus 7: mety hanana famolavolana mihetsiketsika io
Navoaka ilay sary heverina fa tena sary an'ny OnePlus 7. Ny sahanin'ny orinasa sinoa manaraka dia mety hanana famolavolana diotra.
Fantaro bebe kokoa momba ny fanapahan-kevitry ny OnePlus hampiditra ny famandrihana tsy misy tariby ao anaty telefaona atombony amin'ity taona ity.
OnePlus dia namoaka ny OxigenOS 9.0.2 ho an'ny OnePlus 5 sy 5T: olana maro raikitra
OnePlus 5 sy 5T dia namoaka ny Oxygen OS 9.0.2 ho an'ny OnePlus 5 sy 5T. Ny olana isan-karazany dia namboarina, toy ny Wi-Fi mifanentana amin'ny fampiharana sasany.
Ny famoahana OnePlus 3 sy 3T ao amin'ny Geekbench miaraka amin'ny Android Pie: akaiky ny fanavaozana
Ny OnePlus 3 sy 3T dia tafaporitsaka tao amin'ny benchmark Geekbench izay mihazakazaka Android Pie ho toy ny rafitra miasa. Midika izany fa havaozina tsy ho ela izy ireo.
Ny OnePlus 5 sy 5T dia mahazo OxygenOS 9.0.1 taorian'ny nahazoany Android Pie
Ny Oneplus 5 sy 5T dia manomboka mahazo OxygenOS 9.0.1 amin'ny alàlan'ny fanavaozana izay zaraina tsikelikely amin'ny alàlan'ny OTA.
OxygenOS 9.0.3 dia tonga ao amin'ny OnePlus 6 miaraka amin'ny vaovao sy fanatsarana maro: mba hahafahanao mametraka azy
OnePlus dia nanomboka namoaka vaovao farany OnePlus 6 vao tsy ela akory izay. Ny fanavaozana dia mitondra fanatsarana marobe amin'ny telefaona.
Ny OnePlus 5 sy 5T dia havaozina amin'ny Android Pie
Talohan'ny faran'ny taona, ny bandy ao amin'ny OnePlus dia namoaka ny fanavaozana nandrasana hatry ny ela ho an'ny OnePlus 5 sy 5T an'ny Android Pie
Fantaro ny momba ny Warp Charge 30, ilay haitao haingam-pandeha haingana nampidirina tao amin'ny OnePlus 6T McLaren Edition ankehitriny.
Ny OnePlus 6 sy 6T dia mahazo MIUI 10 miorina amin'ny Android Pie
Ny mpamorona antoko fahatelo dia nahatonga ny finday OnePlus 6 sy 6T hanana MIUI 10 miorina amin'ny Android Pie.
Ny Android Pie beta dia misy amin'ny OnePlus 5 sy OnePlus 5T ankehitriny
OnePlus dia namoaka ny Android Pie beta voalohany ho an'ny OnePlus 5 sy OnePlus 5t tamin'ny alàlan'ny programa beta.
Ny OnePlus 6T McLaren Edition dia ofisialy izao
OnePlus 6T McLaren Edition: famaritana, vidiny ary fanombohana. Hijery misimisy kokoa momba an'ity fanontana manokana an'ny haavo avo lenta an'ny marika ity.
Ny fivarotana ny OnePlus 249T dia nitombo 6% raha oharina amin'ny OnePlus. Fahombiazana tokoa ny afaka mivoaka any Etazonia.
Voamarina: ny OnePlus 6T McLaren Edition dia hanana RAM 10 GB ary haitao haingam-pandeha haingana kokoa
Misy famoahana vaovao milaza fa ny OnePlus 6T dia hamely ny tsena amin'ny RAM 10GB sy ny haitao haingam-pandeha haingana kokoa noho ny OnePlus 6T tany am-boalohany.
Voamarina: OnePlus dia handefa ny smartphone 5G voalohany miaraka amin'i Snapdragon 855 amin'ny fiandohan'ny taona 2019 any Eropa
Araka ny filazan'ny OnePlus, ny finday avo lenta voalohany any Eropa dia hatolotry ny orinasa iray ihany. Ho tonga miaraka amin'i Snapdragon 855, anarana hafa, ary amin'ny fiandohan'ny taona 2019.
Ny OnePlus 3 sy 3T dia mahazo fanavaozana vaovao mitondra ny fitoviana amin'ny headphones Bull-Type-C sy maro hafa
Natomboka ny fizarana fanavaozana vaovao ho an'ny OnePlus 3 sy OnePlus 3T. Ny fanavaozana dia tonga amin'ny OxygenOS 5.0.7.
Ny OnePlus 6T McLaren Edition dia ho tonga miaraka amin'ny 10 GB RAM ary 256 GB ny memo anatiny
Nisy tatitra vaovao iray milaza fa ny smartphone iray an'ny OnePlus ', OnePlus 6t McLaren Ediion, dia hamely ny tsena amin'ny RAM 10GB sy ROM 256GB.
OnePlus sy McLaren dia miara-miasa amin'ny famerenana ny OnePlus 6T
Fantaro bebe kokoa momba ny fampisehoana ny OnePlus 6T izay natomboka niaraka tamin'ny McLaren araka ny nambaran'ny marika sinoa.
OxygenOS Open Beta 7 dia tonga ao amin'ny OnePlus 6 miaraka amina fiasa vaovao sy mahaliana
Vaovao tsara ho an'ny mpampiasa OnePlus 6: OxygenOS Open Beta 7 dia azo alaina ho an'ireo fitaovana ireo. Fantaro ny vaovao entiny!
Vaovao tsara: ny OnePlus 5 sy 5T dia handray Android Pie tsy ho ela
Raha tompona OnePlus 5 na 5T ianao dia arahaba soa. Tsy ho ela dia hahazo ny fanavaozana ny Android Pie amin'ny fitaovanao ianao.
Tonga ao Espana amin'ny fomba ofisialy ny loko OnePlus 6T amin'ny Thunder Purple
Fantaro bebe kokoa momba ny fanombohana ny OnePlus 6T amin'ny volomparasy ofisialy any Espana. Manomboka amin'ny 15 Novambra ny telefaona.
OnePlus handefa telefaona 5G amin'ny taona 2019 amin'ny anarana vaovao
Fantaro misimisy kokoa momba ny fanombohana an'ity telefaona 5G 2019G vaovao ity avy amin'ny OnePlus miaraka amin'ny anarana vaovao hampidirina amin'ny taona XNUMX.
ARCore dia mifanaraka amin'ny OnePlus 6T, Xperia XZ3 ary Honor 8X
Ny lisitry ny fantsona mifanaraka amin'ny sehatr'asan'i Google, ARCore, dia nitarina tamin'ny fanampiana fitaovana vaovao telo.
Ho tonga tsy ho ela amin'ny loko vaovao ny OnePlus 6T
Fantaro bebe kokoa momba ny loko vaovao izay hanombohana ny OnePlus 6T eny an-tsena aorian'ny fivoahan'ny faran'ny herinandro ity ao amin'ny tranokalany.
OnePlus dia manazava ny antony OnePlus 6T dia tsy misy fampandrenesana LED na fanoherana ny rano
OnePlus dia nanazava ny antony maha-flagship vaovao azy, ny OnePlus 6T dia tsy manana rafitra fampandrenesana LED na fanoherana ny rano.
Ahoana ny fametrahana ny kinova OxygenOS 9.0.2 vaovao amin'ny OnePlus 6
OxygenOS 9.0.2 dia azo alaina ho an'ny OnePlus 6 miaraka amina endrika vaovao sy fanatsarana vaovao. Azavainay ny fomba fametrahana azy amin'ny fitaovana.
Mendrika havaozina ny OnePlus 5 / 5T -n'ilay OnePlus 6T vaovao ve isika?
Omaly dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny taranaka vaovao an'ny orinasa OnePlus, ny 6T, terminal izay azo heverina ho ...
Fampitahana ny OnePlus 6T amin'ny OnePlus 6
Rehefa avy nandrakotra ny fanolorana ofisialy azy izahay, dia manome anao fampitahana feno amin'ny OnePlus 6T amin'ny OnePlus 6. Mendrika ve ny fanovana finday?
Ny telefaona 5G voalohany an'ny OnePlus dia efa manana daty famotsorana
Fantaro bebe kokoa momba ny daty nanombohan'ny OnePlus ny telefaona 5G voalohany any Eropa. Ny marika no ho voalohany eo amin'ny tsena.
Ny OnePlus 6T dia efa ofisialy ary ireo no mampiavaka azy
Vao avy nanolotra ny OnePlus 6T i OnePlus, ny sainam-pirenena vaovao an'ny orinasa aziatika izay misongadina amin'ny mpamaky ny rantsantanany tafiditra ao amin'ny efijery.
Ahoana ny fanarahana ny hetsika fampisehoana an'ny OnePlus 6T
Ahoana ny fanarahana ny fampisehoana ny OnePlus 6T mivantana. Jereo ny fomba tsotra ahafahanao manaraka ity hetsika fampisehoana ity.
OnePlus dia manova ny daty fampisehoana an'ny OnePlus 6T
Ny OnePlus 6T dia haseho amin'ny 29 oktobra amin'ny fomba ofisialy. Jereo ny antony nanovan'ny marika ny daty fametrahana azy.
Ho tonga miaraka amin'ny Android Pie ny OnePlus 6T
Ny OnePlus 6T dia ho avy miaraka amin'ny Android Pie. Fantaro misimisy kokoa momba ny kinova fiasa farany avo lenta an'ny marika.
Ny daty fandefasana ny OnePlus 6T any Eropa dia ofisialy izao
Ny daty fanombohana OnePlus 6T dia nohamafisina tany Eropa. Fantaro bebe kokoa momba ny fotoana hahatongavan'ny marika haavo sinoa any Eropa.
Ny CEO CEO OnePlus dia manazava: fanapahan-kevitra sarotra ny fanesorana ilay jack audio
Peter Lau no CEO sy mpanorina ny orinasa izay efa hanomboka ny OnePlus 6T. Nataony mazava tsara: tsy mora ny nanala ilay jack audio.
OnePlus dia manambara ny daty fampisehoana an'ny OnePlus 6T
Ny OnePlus 6T dia haseho amin'ny 30 oktobra amin'ny fomba ofisialy. Fantaro bebe kokoa momba ny fampisehoana ny telefaona marika Sinoa.
Tafaporitsaka ny OnePlus 6T daty famoahana azy
Nanambara ny daty mety hanombohana ny OnePlus 6T. Fantaro ny daty hahatongavan'ny farany ambony ny marika sinoa.
Nanamafy ny famolavolana farany an'ny OnePlus 6T amin'ny sary ofisialy
Ny famolavolana ny OnePlus 6T dia voamarina amin'ny sary vaovaony. Fantaro bebe kokoa momba ny famolavolana marika sinoa avo lenta.
Andramo ny OnePlus 6T alohan'ny olon-kafa maimaim-poana
Ianaro ny fomba hidirana amin'ity programa fanandramana OnePlus 6T ity mba hahazoana unite maimaim-poana ao an-tranonao alohan'ny olon-kafa.
Fanasana iray tafaporitsaka dia manamafy fa ny OnePlus 6T dia haseho amin'ny 17 Oktobra
Ny sary tafaporitsaka dia mampiseho ny fanasana ny hetsika famoahana OnePlus 6T ary fantatray izao fa ny 17 Oktobra no daty hanatanterahana izany amin'ny fomba ofisialy.
Ny OnePlus 6T dia miseho amin'ny sary tena izy ary miharihary ny endriny
Ny OnePlus 6T dia nipoitra tamin'ny sary tena izy, naneho ny endriny Waterdrop. Jereo hoe hanao ahoana ny sainam-pirenen'ny orinasa manaraka.
Ny OnePlus 6 dia efa manana Android 9.0 Pie amin'ny fomba milamina
Ny OnePlus 6 dia efa manavao ny Android 9.0 Pie, ilay kinova farany an'ny rafitra fiasan'i Google. Manome anao ny antsipiriany izahay.
Ny fanambarana voalohany an'ny OnePlus 6T dia eto
Nanala ny fanambarana ofisialy voalohany an'ny OnePlus 6T. Fantaro bebe kokoa momba ny marika farany avo lenta an'ny marika amin'ny fahitalavitra voalohany.
Voamarina: ny OnePlus 6T dia hanao veloma ny mpampitohy audio 3.5mm Jack, araka ny tranga misy azy
Ny tranga tafaporitsaka tato ho ato an'ny OnePlus 6T dia manamafy fa ny avo lenta dia tsy hanana mpampitohy audio 3.5mm Jack.
Ny OnePlus 6T dia tsy hanana jack audio 3.5mm
Tsy hisy jack audio 3.5mm amin'ny OnePlus 6T. Fantaro misimisy kokoa ny antony mahatonga an'io tsy eo amin'ny faran'ny marika marika sinoa io.
OnePlus sy Google dia manambatra hery hamorona lalao
OnePlus sy Google dia mamorona Crackables lalao vaovao. Fantaro bebe kokoa momba ity lalao ity izay teraka tamin'ny firaisana teo amin'ireo orinasa roa ireo.
Ny OnePlus 6T dia azo aseho amin'ny 17 Oktobra
Ny OnePlus 6T dia haseho amin'ny 17 Oktobra. Fantaro bebe kokoa momba ny daty hanehoana ny faran'ny farany marika vaovao sinoa.
OnePlus dia mandefa ny Android 9.0 Pie open beta ho an'ny OnePlus 6. Fantaro misimisy kokoa momba ny fiandohan'ity beta misokatra ity ho an'ny farany.
Hanokatra fivarotana ara-batana voalohany any Paris ny OnePlus
Hanokatra fivarotana ara-batana voalohany any Eropa any Paris ny OnePlus. Fantaro bebe kokoa momba ny fivarotana ny marika sinoa ao amin'ny renivohitra frantsay.
Ny OnePlus 5 sy 5T dia mahazo maody sary ho an'ny selfie amin'ny beta vaovao
Ny beta vaovao an'ny OxygenOS dia tonga ao amin'ny OnePlus 5 sy 5T. Fantaro bebe kokoa momba ny beta vaovao izay mahatratra ny farany amin'ny vaovao.
Ny OnePlus 5 sy OnePlus 5T dia efa manana fanohanana an'i Treble
Ny OnePlus 5 sy OnePlus 5T dia mifanaraka amin'ny Project Treble. Fantaro ny momba ity fanavaozana ity izay mamela an'ity fanohanana ity.
Ny OnePlus 6T dia ho tonga amin'ny volana oktobra miaraka amin'ny fiakaran'ny vidiny
Ny OnePlus 6T dia hapetraka amin'ny volana oktobra miaraka amin'ny fiakaran'ny vidiny. Fantaro misimisy kokoa momba ny haavo farany ambony an'ny marika sinoa.
Hisy fanavaozam-baovao hivoahana mba hanamboarana ny efijery manaparitaka ny OnePlus 6. Fantaro misimisy kokoa momba ny fanavaozana izay hatombok'ilay mpanamboatra sinoa.
Ny OnePlus 3 sy 3T dia hahazo Android P
Tsy ela akory izay dia nanambara ny fandaharam-potoana fanavaozana ny OnePlus, izay niantoka fanavaozana ara-dalàna roa taona ny ...
Ny famirapiratany mandeha ho azy an'ny OnePlus 6 dia miteraka olana
Ny famirapiratanana mandeha ho azy dia miteraka olana eo amin'ny efijery OnePlus 6. Fantaro misimisy kokoa momba ny olana mahazo ny mpampiasa.
Navoaka ny fanavaozana ny fiarovana OnePlus 3 sy 3T Jolay
OnePlus dia namoaka fanavaozam-baovao vaovao ho an'ny OnePlus 3 sy 3T, ny sainam-pirenena roa an'ny taona razamben'ny orinasa, izay miaraka amin'ny patch OnePlus dia namoaka ny fanavaozana ny fiarovana mifanaraka amin'ny volana Jolay ho an'ny OnePlus 3 sy 3T miaraka amin'ny fanatsarana kely maromaro .
Ny OnePlus 5 sy 5T dia efa mifanaraka amin'ny Project Treble
Ny OnePlus 5 sy 5T dia efa manana ny fanohanana Project Treble. Fantaro bebe kokoa momba ny beta vaovao izay manampy fanampiana ireo telefaona roa an'ny marika.
Ny OnePlus 6 amin'ny lava mena dia ofisialy
Ny OnePlus 6 amin'ny lava mena dia efa natolotra. Fantaro misimisy kokoa momba ny kinova vaovao an'ny haavo farany an'ny marika sinoa amin'ny lava mena.
Amin'ny 2 Jolay, misy OnePlus 6 vaovao azo ambara amin'ny loko mena
OnePlus dia afaka nanambara loko vaovao ao anatin'ny faritra OnePlus: mena.
Nanome toky i OnePlus fa hanolotra fanavaozana mandritra ny telo taona ho an'ny findainy
OnePlus dia hanome fanavaozana mandritra ny telo taona ny findainy. Fantaro bebe kokoa momba ny doka amin'ny marika manome toky fa hanome fanavaozana.
Ny baterian'ny OnePlus 6 dia mandeha haingana be. Fantaro bebe kokoa momba ity tsy fahombiazana ity izay tonga taorian'ny fanavaozana ny OxygenOS vaovao hatramin'ny farany,
Ny OnePlus 6 dia mahazo fanavaozana hanitsiana ireo lesoka fiarovana hita
Ny OnePlus 6 dia nohavaozina mba hanitsiana ny lesoka fiarovana. Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana ny OxygenOS izay mamely ny avo indrindra.
Ny OnePlus 6 dia mahatratra singa iray tapitrisa amidy ao anatin'ny 22 andro
Ny OnePlus 6 dia mivarotra singa iray tapitrisa ao anatin'ny 22 andro. Ny avo lenta amin'ny marika sinoa dia fahombiazana ary efa mihoatra ny iray tapitrisa amidy.
Ny OnePlus 6 Silk White dia miverina ao anaty tahiry
Ny OnePlus 6 Silk White dia misy amin'ny Internet indray. Fantaro misimisy kokoa momba ilay kinova manokana an'ny telefaona izay havoaka indray.
Ny OnePlus 6 Silk White dia hanomboka amin'ny 12 Jona indray
Ny OnePlus 6 Silk White dia miverina eny an-tsena amin'ny 12 Jona. Fantaro bebe kokoa momba ny fandefasana telefaona, rehefa namidy andro vitsivitsy lasa izay.
Ny OnePlus 6 manao akanjo fotsy sy ny headphones Bullets Wireless dia efa nivarotra
Ny OnePlus 6 sy ny Bullets Wireless dia nivarotra tany Eropa sy Amerika. Fantaro misimisy kokoa momba ny fahombiazana ananan'ny avo lenta amin'ity kinova manokana ity.
OnePlus dia tsy handefa telefaona midadasika raha tsy farafaharatsiny 2021
OnePlus dia hanohy hiloka amin'ny farany amin'ny taona ho avy. Fantaro bebe kokoa momba ny drafitry ny orinasa, izay tsy handefa telefaona eo afovoany amin'izao fotoana izao.
Ny kinova 256GB an'ny OnePlus 6 dia amidy amina firenena maro
Ny OnePlus 6 miaraka amin'ny fitehirizana 256GB amidy amina firenena maro. Fantaro misimisy kokoa momba ny fahombiazana ananan'ity kinova finday ity manerantany.
OnePlus dia manaisotra ny asan'ny foana amin'ny fampisehoana noho ny fanjifana bateria avo lenta
Ny orinasa aziatika dia nanamafy tamin'ny alàlan'ny serivisy fanampiana ara-teknika fa nanala ny asany AOD izy noho ny fanjifana bateria be loatra.
Ny fanavaozana voalohany an'ny OnePlus 6 dia manaisotra ny asan'ny On On Display (AOD) foana
Ny asan'ny On On Display foana izay avy amin'ny tanan'ny OnePlus 6, dia nanjavona tsy ho ao amin'ilay fitaovana taorian'ny fanavaozana farany ny terminal, fanavaozana vaovao izay manome antsika zava-baovao.
Ny OnePlus 3 sy OnePlus 3T dia efa manana ny fankasitrahana ny tarehy aorian'ny fanavaozana ny Oxygen farany
Araka ny nampanantenain'ny lehiben'ny OnePlus, 5 volana lasa izay, ny fanekena dia ho tonga amin'ny OnePlus 3 sy One Plus 3T. Efa misy io rafitra io.
Ny OnePlus 6 dia mahazo 5 amin'ny 10 amin'ny isa iFixit
Ny fanamboarana natolotry ny OnePlus 6 dia latsaka antsasaky ny isa tsara sy ratsy, 5 amin'ny 10 ihany.
Ny OnePlus 6 no telefaona be mpividy indrindra
Ny OnePlus 6 no telefaona be mpividy indrindra amin'ny marika atomboka. Fantaro bebe kokoa momba ny varotra tsara an'ny avo lenta izay fahombiazan'ny mpamokatra sinoa.
Ny OnePlus 6 dia mandalo fitsapana fiaretana malaza indrindra
Ny OnePlus 6 dia manaraka ny fitsapana fiaretana JerryRigEverything. Fantaro misimisy kokoa momba ny fitsapana fanoherana malaza izay efa niatrika ny haavo farany ambony an'ny marika sinoa.
Sintomy ny sary an-tsary an'ny OnePlus 6 vaovao
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitanao ireo sary vaovaon'ny sary vaovao izay avy amin'ny tanan'ny OnePlus 6 amin'ny famahana azy ireo tany am-boalohany.
OnePlus 6: fepetra sy toetra mampiavaka ny sainam-pirenena vaovao
Ora vitsy lasa izay, nanolotra ny finday avo lenta vaovao ny solo-teknolojia OnePlus ... Miresaka momba ny OnePlus 6 isika, ilay mpandimby ny OnePlus 5 sy 5T, fitaovana roa izay hita ao anatin'ny 10 top AnTuTu ho iray amin'ireo lehibe indrindra mahery izay, ankehitriny, afaka hitantsika eny an-tsena.
Afaka mividy ny OnePlus 6 mivantana amin'ny Amazon isika
Ny orinasa Aziatika OnePlus dia nahavita fifanarahana tamin'ny Amazonie goavambe e-varotra hivarotra ny sainam-pireneny manaraka amin'ny alàlan'ny Amazon.
Ny OnePlus 6 dia azo vidiana any Netherlands amin'ny andro fampisehoana azy
Ny OnePlus 6 dia azo vidiana any Netherlands amin'ny andro fampisehoana azy. Fantaro bebe kokoa ny fidiran'ny marika amin'ny tsenan'i Netherlands amin'ny alàlan'ny telefaona amin'ity fifanarahana vaovao ity.
Nanivana ny vidiny voafaritra ao amin'ny OnePlus 6 tamin'ny nanombohany. Fantaro bebe kokoa ny vidin'ny findain'ny marika Sinoa amin'ny fotoana hanombohany any amin'ny magazay tsy ho ela.
OnePlus dia manolotra fihenam-bidy hatramin'ny 280 euro raha mividy ny OnePlus 6 izahay
Ny orinasa Aziatika OnePlus dia manome fihenam-bidy mahaliana hatramin'ny 280 euro raha toa ka manolotra ilay OnePlus taloha hividianana ilay maodely vaovao isika.
Ny OnePlus 6 dia aseho amin'ny 16 Mey any London, saingy efa nandalo an'i Geekbench
Ny orinasa OnePlus dia nanamafy tamin'ny fomba ofisialy ny andro fampisehoana ofisialy ny OnePlus 6, terminal izay havoaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny 16 Mey any London.
Ny OnePlus 6 dia hanasongadina sensor amin'ny tahan'ny fo
Ny OnePlus 6 dia hanana sensor tahan'ny fo toy ny Galaxy S9. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao tonga amin'ny finday avo lenta amin'ny marika sinoa.